Ikpuchido Software na Ahịa si counterfeiters? | Martech Zone
Ikpuchido Software na Ahịa si counterfeiters?
O nwere ike ịbụ ụfọdụ n'ime nsogbu kacha njọ m gụrụ na Piracy Software!
Gụọ edemede: Nchịkọta Nchedo Software nke Microsoft. Nke a dị njọ dịka Iwu Patriot! (AKA: Anyi kwesiri ichedo nnwere onwe gi, i gha abughi onye mba ma o buru na i ju ufodu nnwere onwe gi ka anyi chebe nnwere onwe gi hu. Huh?). Microsoft kwesiri ime ka nke a bụrụ ihe ncheta n'ime:
Ihe Nlekọta Nchedo Uru Microsoft: Idebe Software na Oke Ọnụ na Uru site na Explọ!
Ekwenyesiri m ike na ọtụtụ ndị ga-ezu ohi naanị mgbe ha nwere. O doro anya na e nwere ọtụtụ ndị ga-ezu ohi maka ya - mana echeghị m na ọ bụ ọtụtụ. Echere m na m na-ekwu maka ọtụtụ mmadụ mgbe m kwuru na Microsoft Software IS dị oke ọnụ. Ka ọ dị, enweghị m atụ anya ọ bụla mgbe inweta nkwado. Ma - Amaara m na m ga-adabere na mmelite iji mee ka ngwanrọ ahụ na-arụ ọrụ. Ma - Amaara m na m ga-azụta ma wụnye ngwanrọ ndị ọzọ iji kpuchido ngwanrọ Microsoft mwakpo ọjọọ.
Okwu a bu 'counterfeiting' abughi okwu kwesiri ekwesi. Akụrụngwa a abụghị nke adịgboroja… igbe na CD nwere ike ịbụ… mana sọftụwia bụ sọftụwia Microsoft n'ezie. Lụso iwu na-akwadoghị depụtaghachiri ma wụnye ngwanrọ arụnyere BỤGHỊ kpuchido ngwanrọ ma ọ bụ kpuchido ndị ahịa. Ndị ahịa hụrụ ngwaahịa gị n'anya ga-adị njikere ịkwụ ụgwọ maka ngwaahịa a mgbe niile. (M kwụrụ ụgwọ maka XP na Office XP)
Nke ahụ bụ amaghị ama na nzuzu ntụgharị maka Microsoft iji wepụta mpempe akwụkwọ dị otu ahụ. Onwere onye kwenyere na nke a bụ ozi eziokwu? Nke a bụ nsogbu dị na Ahịa taa, ndị mmadụ ekweghị na ya n’ihi na ọ bụ ihe ekweghị ekwe.
Ajax, DOM, RSS, XHTML, SOAP… ihe niile ahụ! Ọ dị mfe karịa ka ị chere!
Wal-Mart Social ịkparịta ụka n'ingntanet weebụsaịtị ada ada. $ 50 ka egwuregwu kacha mma!
William Meloney kwuru
Ọkt 4, 2006 na 12:22 PM
Ekwenyesiri m ike na ihe ka ọtụtụ ná ndị mmadụ ga na-ezu ohi nanị mgbe ha nwere. ”
I sooooo choro ikwere gi. Achọrọ m ka m kwenye na ogbe achịcha ndị ahụ a na-ezuru naanị na-eri nri ezinụlọ onye ohi ahụ agụụ na-agụ. Achọrọ m nke ahụ ka ọ bụrụ eziokwu…
Mana, n'oge a, ekwere m na ngwanrọ, sọftụwia onye ọ bụla, ka a na-ahụ site na ugegbe anwuru anwụrụ nke mmalite nke Microsoft Windows 3.nke ihe… B…GH that na ị copomi ya ziri ezi (!!!) kama ọ bụ na Microsoft 'ọ dị ka ọ dị gị mma' ịdegharị ihe ahụ. (Ezigbo eziokwu ma nke ahụ bụ nghọta.)
Ekwetaghị m na Joe Average nwere ike ịkọwapụta n'etiti ọrụ siri ike nke ndị mmemme ahọpụtara, na-anwa ịchụ ego, na mega-business-monoliths na-anwa ịkwụ ụgwọ ọnụahịa maka ngwaahịa ha. Dika odi nkpa enweghi nkpa n’akụkụ Joe nke sọftụwia ya “n’eji” n’ihe ọ bụla iwu kwadoro ma ọ bụ n'uzo na ezighi ezi.
Nke a bụ ihe nghọta na nke ezighi ezi na nke ahụ. Anyị kwesịrị ịkwụ ụgwọ maka mmemme ọ bụla anyị ji. Ekwetaghị m na Joe Average na-ekwusi ike otu echiche.
ndo… naanị $ 0.02 m
Ọkt 4, 2006 na 1:38 PM
Enweghị mgbaghara dị mkpa, William! Echere m na anyị nọ nso nkwekọrịta karịa ka ị nwere ike iche.
Echere m na arụmụka ahụ kwesịrị mkparịta ụka. Ohi ohi o na enyere ulo oru komputa aka site n’ikesa ihe ngwanro nke oma? Ekwenyesiri m ike na ọ na-eme ụfọdụ.
Ikekwe amaghi m echiche na ndi folti ga akwu ugwo nihi na m n’ekwu ugwo software. Ekwesịrị m ikweta na ejirila m sọftụwia pirated wee kwụọ ụgwọ maka ya ma emechaa. Oge ụfọdụ ikpe a dị oke ụkọ ma amabeghị m ma ọ ruru ego ahụ.
N’ime obi m kwenyere na inye ego na ịchọ njikwa ọnụego ya. Site na ịgbanye na igbochi nke ahụ na njikwa ndị na-amanye mmadụ ịzụta, echere m na ị na-arịọ ka ndị mmadụ zuo ya kama.
Ego ole ka Windows dị? $ 400? $ 100? $ 10 / mo? Gịnị mere o ji baa uru karịa ego na kọmpụta ọhụrụ (OEM) karịa kọmpụta emelitere? Echere m na ụdị ọnụahịa ahụ adịghị mma, Microsoft na-efedkwa nnukwu ego na Piracy kama ime ka ngwanrọ ha dị ọnụ ala.
Ọkt 5, 2006 na 8:56 PM
Enwere m olile anya na ndị ọzọ gaara esonye n'agha ebe a… mana Ewoo… akwadoro m nzaghachi nke ụfọdụ ogologo ma tinye otu ihe ahụ Na Nzaghachi Doug Karr…